Run-DMC Image site n'ikike Flickr http://www.flickr.com/photos/johannahobbs/
Kpọọ m ngwaahịa nke agụmakwụkwọ nka na-emesapụ aka, mana ekwenyesiri m ike na echiche ụwa ga-ekwupụta site n'ọtụtụ isi mmalite na ahụmịhe o kwere mee. Readinggụ akwụkwọ kachasị ọhụrụ nke ọkachamara n'ọhịa gị dị mma. Nweta ọtụtụ blọọgụ na isiokwu akụkọ dịka ị nwere ike gbasara ụlọ ọrụ gị bara uru. Attga nzukọ na ịnọdụ ala na nkwupụta iji bulie ọrụ gị bara uru.
Mana odikwa mkpa ile anya n’èzí na uzo mbu iji kwado echiche gi. Enwere nnukwu ụwa buru ibu, ma ọ bụrụ na ị naghị eji ya eme ihe zuru oke ị na-efu.
N'iburu nke ahụ n'uche, hapụ m ka m gaa ndị Eze Rock, ndị na-amụ hip-hop, Gbaa-DMC, na ihe ha kuziri m gbasara soshal midia.
Na-ekwu Okwu Ukwuu
Ebe ọ bụla ị gara, n'agbanyeghị ebe ị nọ / m kwuru na ị na-ekwu maka nke a, na ị na-ekwu maka nke ahụ… talk na-ekwu okwu mgbe ị na-amụ anya, anụrụ m ka ị na-ekwu okwu mgbe ị na-ehi ụra / Ọ dị onye kọọrọ gị, okwu ahụ adịghị ọnụ ala ?
Kpochapụwo kụrụ aka megide Twitter mgbe niile bụ “Achọghị m ịma na-agụ banyere ihe ndị mmadụ nwere maka nri ehihie.” Ọ bụ ezie na o doro anya na enwere ịba uru dị na Twitter na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ karịa ịkọwapụta omume nri mmadụ, ọ ga-ekwe omume ịkekọrịta.
Enwere otutu nyocha na ihe omuma ndi ozo na-enye ihe akaebe maka onu ogugu kachasi nke ndi mmadu na-aru mmadu kwa ubochi. Aga m eche ọgụgụ isi n'akụkụ gị ma akọwaghị nke a na-enweta ngwa ngwa.
Kama m nwere ike ikwu nkịtị ọgụgụ isi na okwu. Ọ dịghị onye na-enwe mmasị ịbụ onye a gafere-slash-spammed, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha ahọrọ ịdenye aha gị. Ọnụ ọgụgụ dị n'ụzọ ọ bụla na-ewepụ mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ pụtara iwe ndị na-eso ụzọ gị iwe ruo n'ọpụpụ.
Ọ bụ aghụghọ
Ọo ya bụ t'ẹphe tụko nọdu ndzụ, dụgbaa biribiri.
Otu ebumnuche bụ isi nke ntinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta bụ nkwupụta: ime ka ndị na-eso ụzọ gị na ndị na-eso ụzọ gị kwenye na ha ga-abụ ndị na-akwado akara na ozi gị site na iweghachi ọdịnaya gị. Ndị a na-eso ụzọ na-esokwa ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, ndị ama ama, na ndị enyi ha. Kedu otu ị ga-esi belata mkpọtụ ndị ọzọ niile ma kpalie ọrụ?
Otu ụzọ bụ ịkwalite oge mgbasa ozi gị iji nyere aka mee ka ọdịnaya gị pụọ. Enweghị ụkọ data na-egosi ụbọchị ụfọdụ na oge ka mma maka izipu ọdịnaya ka ọ yikarịrị ka a ga-ahụ ya. Ọ dị mma ka ị jiri data a mee ihe niile ị nwere ike ime iji nweta ọdịnaya gị n'ihu.
Ndị na-agba Hollis (Crush Groove 2)
Enwere rhymes ka def, rhymes, rhymes galore / Rhymes ị na-anụtụbeghị mbụ / Ugbu a ọ bụrụ na ị sị na ị nụla ụda m, anyị ga-alụ ọgụ / Ihe kpatara m mere ka ọ bụrụ n'abalị ụnyaahụ.
Dịka mmelite ọ bụla na-eme ka ha mara ihe, injin nchọ na-enyocha ọdịnaya karịa ka ndị mmadụ na-eme. Nke a pụtara na ha, dịka ndị na - agụ akwụkwọ gị, na - ahọrọ ọdịnaya mbụ. Ọdịnaya nke dị ọhụrụ na nke ọhụụ na nke gị (ma ọ bụ nke ika gị) pụrụ iche dị oke mkpa iji nweta ma jigide ihe ndị na-esonụ.
Ihe niile dị mfe iji ghọgbuo ụzọ gị site na ọdịnaya ọhụụ site na iweghachi ma ọ bụ weghachite mbipụta akụkọ ma ọ bụ ọdịnaya na-ejikọ. Ikwesiri igba mbọ hụ na ị na-ebipụta ọdịnaya nke na-atọ ụtọ, nke bara uru na nke bara uru, ma karịa nke mbụ niile. Ma ọ bụghị ya, ị nweghị uru uru pụrụ iche, na ị naghị enye ozi ọhụụ ma ọ bụ nghọta ọhụụ. Nke ahụ bụ ụzọ dị mfe iji ghost obodo na-elekọta mmadụ mgbasa ozi.
Tags: blogịde blọgụatụmatụ ọdịnayadigital marketingFacebookndi oru hollisaghụghọRAPgbaa ọsọ dmcelekọta mmadụ mediaTwitterị na-ekwu ọtụtụ okwu